प्रेमिका बन्न लायक छैनौ श्रीमती कसरी बनाउ ?::mirmireonline.com
प्रेमिका बन्न लायक छैनौ श्रीमती कसरी बनाउ ?
तिम्रो अहमताले मैले तिमिसँग प्रेम गर्न सकिन , या भनौ तिमिलाई आफ्नो प्रमिका हुनेवाल जीवनसाथिको रुपमा चुन्न सकिन । मलाई माफ गर सानु । एउटा सच्चा मित्रको नाताले तिमिसँग माफि माग्दै छु ।
जब म पुन क्यानडातर्फ उडे । सोहि विमानमा तिम्रो हितैसि मित्रलाई देखे । उनले मलाई देख्नेबित्तीकै सोधीन आकास तिमि त कस्तो स्वार्थी रहेछौ । बिदेश आयौ पैसा कमायौ यतिमै धेरै ठुलो मान्छे बनिसकेछौ । तिमिले रिहालाई त आफ्नो मन मस्तीश्क सबैबाट निकालेर फाल्यौ नि हैन । त्यसो पनि के भन्नु तिमीले बिचरीलाई धोका दियौ । छि कस्तो सोच रहेछ , कति गल्डफ्रेण्ड फेर्दै हिड्दा रहेछौ । क्यानडा तिरै भेट्यौ अर्की , कि यत्ै नेपालमा कसैलाई फसाएर हिडेका छौ ।
उनको आरोप अनी आक्रोस शान्त पार्न मलाई हम्मे हम्मे नै पर्यो । किनकी अरु यात्रुहरु पनि चनाखो बन्दै थिए हामिलाई हेरेर ।
हामि सँगै स्कुल पढेका साथी उनले तिमिलाई धेरै माया र भसोसा गर्थिन । त्यसैले यसरी गालि गरिन मलाई । बिचरीलाई के थाहा सत्यता हकै थियो । कोपिलालाई सम्झाउदै भने पहिले शान्तिले कुरा सुन । के भनेको तिमिले मैले त रिहालाई कुनै धोका दिएको छैन । उ र म स्कुलदेखिका साथी आज पनि राम्रो छ सम्बन्ध । बस यति हो ।
मेरो कुरा नसकिदै जवाफ फर्काईन ,आकाश तिमिले कति झुठ बोल्छौ है, मसँग त सत्य बोल । बिचरी तिमिले धोका दिएपछि अहिलेसम्म राम्रो सँग खाना खादिन ,रोएको रोई गर्छे । भन्दैथिई हेर न कोपिला उसले मलाई धोका दियो । चित्तबुझ्दो रिजन नि दिएन । जब उ नेपाल आउन एक साता बाकी थियो । भन्यो म तिमिलाई भेट्न सक्दिन । म घरतिरै ब्यस्त हुनेभए । फेरी घरको काम छोडेर भेट्न तिमि मेरो प्रमिका पनि त रहेनौ ।
यो सुनेर म आफै छक्क परे । तिमि त्यति सम्म बदलिन्छौ सायद मैले नै नसोचेको । केहो बास्तविकता ।
उनलाई नचाहेरै पनि भन्नै पर्यो मैले तिम्रो बारेमा । हो तिमि मेरो प्रेमिका हैन , साथी हौ जसलाई मैले हरेक मोडमा साथ र सहयोग गरेको छु । एक चरण थियो म तिमिलाई माया गर्थे ,आफ्नो बनाउन चाहन्थ्ये । जीवनसाथिको रुपमा अपनाउन चाहन्थ्ये तिमिलाई । तर आफैले ईन्कार गर्यो । मेरो प्रस्तावको जवाफ ..यसरी दिएकी थियौ तिमिले । , के भनेको आकाश तिमिले म त सम्पन्न परिवारकी छोरी , केहिको कमि छैन । खानदानी परिवार चाहिन्छ मलाई अनी हेन्डसम केटा । कमाईपनि राम्रो हुनपर्यो उसको । तिमिमा त्यो अलि कम छ भलै तिमि हेर्दा चै लायक छौ । तर तिमीसँग जीवन कट्न गाह«ो हुन्छ ।
म छागाबाट खसे झै भएको थिए । तिम्रो सोच देखेर । आफुलाई समाल्दै मैले भनेको थिए ल हामि साथि भने सधै रहन्छौ । कहि भेटे बोलाउने गर्नु है रिहा । त्यति भनेर म तिमिसँग हात मिलाएर बिदा भए ।
त्यसको करिव दुई बर्षसम्म हामिबिच सम्पर्क भएन । एकदिन अचानक तिमिलाई सामाजिक सन्जालमा देखे । मलाई रिक्वेश्ट पठाएकी रहिछौ । खोलेर हेरे र स्वीकारे तिम्रो अनुरोध । त्यसपछि दैनिक कुरा गर्न सुरु गर्यो । मब्यस्त हुदा थर्काउथ्यो म सँग बोल्न तिमिलाई समय हुदैन ।
फोनमा पनि घण्टौ कुरा गर्न खोज्थ्यौ । म आफ्नो समय मिलाएर तिमिसँग कुरा गर्थे । मेरो प्रगति देखेर तिमिले खुसि ब्यत्त गर्दा म पनि हर्सित भएको थिए ।
आकाश तिमिले यति प्रगति गर्छौ भन्ने अनुमानै थिएन । मान्छे नि झन ह्यान्सम भएछौ । आम्दानी पनि राम्रै । तिम्रो दाईलाई भेटेको थिए ,काठमाण्डौमा घर बनाएका छौ अहिले । आमाबाबा गााउमा हुनुहुन्छ अब केहि समयमा उहाहरुपनि आउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । मान्छे परिवर्तन हुन केहि समय लाग्दो रहेनछ । नि है ।
मैले जवाफ फर्काएको थिए हो रिहा ,सहि कुरा गर्यो । तर मान्छेको अवस्था त बदलीन्छ तर सोच भने त्यति छिटो परिवर्तन भएको देखिदैन ।
होर भन्दै लामो हासो हास्यौ ।
म नै ब्यस्त भएकाले त्यसको केहि दिन हाम्रो कुरा भएन । तिमिले त धेरै पटक फोन अनी म्यासेज गरेकि थियो तर मैले कुनै जवाफ फर्काउन पाईन । किनकी सबै कुरा मिलाएर छोटो समयका लागी म नेपाल फर्कनु थियो ।
नेपाल आउने दुई दिन अघि तिमिलाई कल गरेर आफैले सुनाए म घर आउदै छु । घरमा केहि समस्या छ त्यो मिलाउनु छ । दाई आमाबुबाले बोलाउनु भएको छ । तर छिटै क्यानडा नै फर्कन्छु ।
खुसि हुदै भन्यौ । मलाई नभेटि गाउ नजाउ है म तिमिलाई लिन एयरपोर्ट आउछु । मैले हुन्छ पनि भने तर त्यसको १५ मिनेटमा नै दाईको फोन आयो उहाले भन्नुभयो भाई त त रिहासँग प्रेम गर्छस् रे । उसलाई बिहे गर्ने कुरा पो गर्या छस् रे त । केहो भनेर सोध्नुभो । मेरो त शरिरले भुई नै छाडेजस्तै भयो । के भयो म आफैलाई थाहा छैन ।
उहालाई गालि गर्दै भने । कस्तो वाईयात कुरा गरेको ?? तपाईलाई थाहा छ उसको र मेरो बारेमा । मैले पहिले नै सुनाएको थिए । कस्ले भन्यो ।
उहाले शान्त हो न भाई कुरा त सुन ,रिसाउने हो पहिले नै । मलाई थाहा छ तलाई उसले अस्वीकार गरि तर अहिले आशसँग मेरो प्रेम छ । नेपाल आउदैछ । अब केहि समयमा घरमा कुरा गरेर बिहे गछौ भनेर साथीहरुलाई उसैले भन्या रहेछ । त्यहि भएर मैले थाहा पाएलगत्तै तलाई सोधेको नि ।
त्यसपछि भने तिम्रो अनुहार सम्झेर पनि घिन लागेर आयो । आखा अगाडि हसिलो आकृति आयो तिम्रो तर कपट , अहमता , स्वार्थ अनी पैसा र रुपसँग सम्बन्ध अनी प्रेमलाई तौलिने तिम्रो त्यो घिनलाग्दो व्यावहार सोच आज पनि उस्तै थियो । तिमिसँगका हरेक याद मेटाउन मन लाग्यो । सायद मलाई सिधै म तिमिलाई प्रेम गर्छु भनेको भए । मेरो जवाफ जे आएपनि हामिबिचको मित्रता सधै रहन्थ्यो । त्यो पनि गरेनौ तिमिले ।
मैले लगत्तै तिमिलाई फोन गरेर भने मलाई लिन नआउनु रिहा , समय फिक्स छैन । म सिधै घर जानु छ । तिमिलाई भेट्न पनि सक्दिन । अनी साथिहरुलाई हाम्रो बारेमा जे भनेर हल्ला फिजाएकी ह््यौ त्यसले तिमिलाई नै असर गर्नेछ । तिमि हिजो जस्तो थियौ आज पनि त्यस्तै रहेछौ जो लालचि ,स्वाथी अनी मतलबी ।
आफैले थुकेको थुक चाट्न खोज्नु राह्रो हैन । आजदेखि म सँग सम्पर्क पनि नगर्नु । सायद केहि भन्देई थियौ मैले सुन्न चाहिन ।
यसरी अन्त्य भयो हामिबीचको रिलेसन कोपिला । म आज पुन फर्कदैछु तर तिमिले त मलाई नै आरोप लगायौ । कोपिलाले चम्म मान्दै भनिन सरी यार । उ त्यस्ती होली भनेर अनुमानै गर्न सकिन । साथिहरु त यो नै ठिक छैन भन्थे । स्वाथी र लोभ लालच छ उसमा , अल्छी पनि छ तर यस्तो तल गिर्ली भन्ने लागेको थिएन ।
मैले भने किन माफि माग्छौ , तिम्रो गल्ति हैन । नेपाली समाजमा यस्ता थुप्रै रिहा छन् । जो पैसा अनी रुपका पछि लाग्छन् । क्षणिक ऐस आराम खोज्छन् । त्यहि कारण आफ्नो जीवन नै कतिले त नर्क बनाएका पनि छन् ।
उनको केहि प्रतिक्रिया आएन । मलिन अनुहार खै के सोच्न थालिन मैले अनुमान लगाउन सकिन । निक्कैबेर सन्नाटा छाएको अनुभव गरे । बिदा हुने बेला मलाई बोलाउदै भनिन् ,, आकाश पैसा र रुपका पछि लाग्नेहरुको मानसिकता आपराधिक पनि बन्न सक्छ । होस् पुर्याउ है ।
उनले किन त्यस्तो सुझाव दिईन म भन्न सक्दिन । तर तिमिलाई एउटा प्रश्न गर्न मन छ रिहा …..तिमि मेरी प्रेमिका बन्न लायक छैनौ …जीवन संगीनि कसरी बनाउ ??